Serbia:arovy amin’ireo mpandray zavamahadomelina ny ankizy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Marsa 2009 3:22 GMT
Vakio amin'ny teny Español, srpski, 繁體中文, 简体中文, English
Ny vadin'i Jelena fahiny, lehilahy iray miankin-doha amin'ny zava-mahadomelina, dia tonga tao an-tranony ary nandrahona ny zanany. Nisaraka taminy i Jelena, roa taona lasa izay. Nomen'ny Fitsarana alàlana hahazo mitsidika ny zaza ingahirainy, satria noheverina hanampy ny fitsaboana azy hiala amin'ny fiankinan-doha amin'ny zavamahadomelina izany, nefa kosa tsy mbola nanome mihitsy fanampiana ho an-janany izy no sady lasa loza mitatao ho an'i Jelena sy ny zanany.
Niresaka tamin'ny kilasy ao amin'ny Sampam-pianarana Serba momba ny fampahalalam-baovao amin'ny alalan'ny Tranonkalan-tserasera i Jelena. Tafiditra ho isan'ny resaka lahatsoratra mafana fo tao amin'ny Facebook ny resany. Namorona takelaka iray Cause Page tao amin'ny Facebook ireo mpianatra mba ho fanandràtana azy ity sy ny toa azy. Maherin'ny 250 ireo olona niditra tamin'izany Cause Page izany. Dragana Banković, Goran Necin sy Dragan Milošević dia samy namoaka tantàra mikasika ny nanjo an'i Jelena sy ny fianakaviany mba hanairana izao tontolo izao amin'ny tranga toy itony. Hoy izy ireo nanoratra (SRB):
Lehilahy iray miankin-doha amin'ny zavamahadomelina tao Serbia no nanakorontana ny fiainan-janany nandritry ny fotoana fohy nahazoany alàlana hanaovana famangiana. Ity tantàra ity dia natao ho an'ireo mpandinika ny lalàna mipetraka. Na ireo izay mbola mihevitra koa ny hametraka izany.
Ity tantàra ity dia miresaka momba ny antokon-draharahan'ny governemanta izay toa tsy afaka akory – na tsy marisika – hiaro reny iray miampy ny zanany amina olona iray atahorana noho ny fandraisany zavamahadomelina. Tsy misy eritreritra velively hitsaratsara ny manampahefana, raha nanoratra ity lahatsoratra momba ity tranga iray ity izahay, fa kosa mba te-hanaitra ny sain'ny besinimaro fotsiny.
Jelena dia renin-jazakely iray vao efatra taona monja. Telo taona taorian'ny nahavitan'ny fanambadiana, nisaraka tamin'ny vadiny izy – izay lehilahy iray miankin-doha amin'ny zavamahadomelina. Nisaraka izy noho ny fiankinan-doha sy ny fitondran-tenan-drangahy toy ny marary saina. Avy eo, nilefa lavitra izy, mba hanomboka fiainam-baovao, sy mba hahita vady vaovao koa raha mety ny tàntana. Avy eo dia nanomboka ny olana maro samihafa. Tsy afa-po ilay vadiny taloha amin'ny hoe indray mandeha isaky ny roa herinandro monja sy isaky ny faran'ny herinandro ihany vao ho afaka mamangy ny zanany. Tonga teo an-tokonam-baravaran-dry zareo àry rangahy, efa nentin'ny zavamahadomelina sy ny toaka, nanao rahom-bava, ary tonga hatramin'ny fandonana mafy ny varavarana sy ny varavarankely tamin'ny hooligans. Ny hany valinteny azon'i Jelena sy ilay vadiny vaovao ary ny zanany avy amin'ny departemantam-panjakana dia ny hoe tsy andraikitr'izy ireo ny fandriampahalemana sy ny fiarovana azy telo mianaka.
Raha ny andininy faha 173 amin'ny Fehezan-dalàna, toko faha 11, momba ny fanandevozana sy ireo tatitra: “Andraikitry ny fitsarana mahefa ny miaro ny voninahiny [lazany] sy ny voninahitry ny olona manatona azy sy izay rehetra voakasik'izany amin'ny ompa, fandrahonana ary ireo herisetra hafa”. Tsy maintsy mandray ny andraikiny ny Fitsarana… ary ny mpitandro filaminana koa toraka izany!
Ity fianakaviana ity dia nividy trano kely iray misy tany mba azo volena ao amina faritra ambanivohitra iray manodidina an'i Belgrady, amin'ny ilany atsimo. Any faritra lavitra andriana any, irery ry zareo ary dia mora ianjadian'ny fanafihana (ary ny fitsarana ao Belgrady dia nilaza tamin'i Jelena fa tsy afaka velively hanome alàlana azy ireo hitazona basy mandram-piravon'ny raharaha ifanolanany amin'ny vadiny taloha ry zareo!)
Ahoana no azontsika hanampiana?
Mihazakazaka ny fotoana ho an'i Jelena sy ny zanaka lahikeliny. Raha manao ity ianao, dia tena ataovy amin'ny fo. Raha te-hanampy isika, tsara avadika ho asa mivaingana ireo hevitra ireo: tsy maintsy omena ny fanampiana sahaza azy ilay reny sy ny zanany. Ny tiana hambara eto dia ny fiarovana.
Ny fanampiana tsara indrindra dia ny atao amin'ny fotoanany sy feno tanteraka. Ny valin'ny fanontaniana hoe “Rahoviana” dia mitovy daholo ho anao sy ny fitsarana ary ny mpitandro filaminana sy ireo sampan'asa miahy ny ara-tsosialy rehetra. Ny valiny dia IZAO ANIO IZAO.
07 Febroary 2021Eoropa Afovoany & Atsinanana